Q.3aad – Nidaamka Federaalku Xal uma ahan Dhibaatada Soomaalida | Moment Union Somali Diaspora
Figradda hore ee oranaysa waa in nidaamka federaalka lagu saleeyo Waqooyi iyo Koonfur ama Soomaaliya iyo Soomaliland waxaa qaba qaar ka mid ah dadka Soomaaliyeed ee ka yimid Soomaaliland ama gobollada Waqooyi, islamarkaasna ka soo horjeeda kala-goynta SoomaaliyaDadkani waxay ku doodaan in Soomaaliya ay koobneyd laba gobol oo ay kala gumeysan jireen laba gumeyste. Markii ay iska xoreeyeen gumeysigana, labada gobol iskood ayay iskugu tageen. Dooddani waxay leedahay, guuxa dadka dega Waqooyiga Soomaaliya wuxuu ka billowday ku xadgudub lagu xadgudbay isku-imaatinkii hore oo ujeeddadiisuna ahayd in labada gobol midoobaan, ayna si caddaalad ah u qeybsadaan maamulka. Inkastoo aan wax shuruud ah la kala qoran, haddana, waxay figraddani ku doodaysaa, ujeeddadu way iska caddayd. Haseyeeshee, reer Koonfur baa si kale u adeegsaday midnimadii, dabadeedna ku duudsiyey reer Waqooyi. “Guuxa keenay dagaalkaba wuxuu salka ku hayaa nidaamka federaalka oo lagu xadgudbay,” ayey dadkani qabaan. “Marka haddii Soomaaliya ay isku soo noqonayso waxaa lama huraan ah in hadda dib looga hadlo oo loo gorgortamo Waqooyi iyo Koonfur” ayey dabadhigaan.
Gobolladii Dowladdii Milatriga ee Siyaad Barre
Waxaan rumaysanahay inay taasi horumar tahay. Hayeeshee, anigu sideedaba ma qabo in nidaamka federaalku ka shaqayn karo dalka. Haddii la samaynayana waxaan qabaa inaan gobolladu ka badan afar, la iskuna raaciyo hab ku salaysan qaaciddooyinka dhaqaalaha iyo horumarka
Gobolladii Gumeysigu ka Tegey
Gumeysigii dalka ka tegey wuxuu ka tagay lix gobol oo ah Koonfur iyo laba ah Waqooyi. Siddeedan gobol laftooda lama garanayo asal ahaan meel ay ka yimaaddeen iyo halbeeg la isticmaalay markii la samaynayey. Gumeysigu wuxuu u samaystay in habkiisa maamulka uu ku gaaro, wuxuuna u arkay in siddeedan gobol ay tahay sida ugu habboon ee uu u habayn karo maamulkiisa xaaladda la joogay. Inkastoo ay jiraan dad qaba in nidaamkan loo noqdo, haddana taas macnaheedu ma ahan inuu yahay nidaam caddaalad ah. Gobol walba waxa uu doonayaa nidaamka uu isleeyahay waxaad ku heleysaa wax badan.
Tan kale, marka awoodda dhaqaale iyo aqooneed laga fiiriyo, waxay figraddani yeelanaysaa cilladaha figradda 18-ka gobol. Dhaqaale ahaan lama awoodo. Xaaladda hadda jirta marka la fiiriyana way baaba‟een gobolladii hore maaddaama dalka iyo dadka uu ku dhacay is-baddel weyn xilligii Kacaanka iyo xilliyadii dagaallada sokeeye.
Gobollada ka Samaysmay Dagaallada Sokeeye
Colaadda ka dhalatay dagaallada sokeeyey waxay keentay in dadkii wada degganaa magaalooyinka iyo gobollada dalku ay dhibaatooyin badan isku geystaan. Taasina waxay sababtay in dadku uu kala qaxo oo uu qof walba meesha uu ku nabadgeli karo uu aado. Waxaa sidaa ku abuurmay gobollo iyo degmooyin u habaysan qaab qabiil. Xitaa magaalooyinka waaweyn ee dalka waxaa loo kala deggan yahay xaafadaha hab qabiil.
Sanadkii 2000, waxaan tagay Xamar iyo Hargeysa. Waxaan labadaba ku arkay in loo deggen yahay qaab beeleed. Magaalada Xamar oo aan hore ugu noolaan jiray, waxaa iska baddalay wax weyn dhinac deegaanka. Magaaladu uma qeybsanayn Waqooyi iyo Koonfur oo kaliya waagaas.
Waxaa jirta inay jireen illaa toddobo deegaan oo midba uu qabiil gooni ah deggen yahay. Nin dhallinyaro ah oo aan saaxiib nahay oo aan kula kulmay Xamar ayaa igu yiri, “Waxaan deggenahay xaafad mushakal ahoo uu markaas ula jeeday xaafad ay qabiillo kala duwan deggen yihihiin,” isagoo ku faanaya. Marka aan sii wareystay ayuu ii sheegey in mushakalnimada lafteedu aysan ahayn Soomaali oo dhan laakiin ay tahay beelaha dega Koonfurta Soomaaliya.
Si kastaba ha ahaatee, Xamar dhibkan waxaa la qaba dhammaan magaalooyinka waaweyn iyo gobollada dalka. Sidan waxaa ku samaysmay illaa shan gobol oo ku salaysan beelo. Haddaba, waxaa jirta figrad ku doodaysa in federaalka Soomaalida lagu saleeyo shantan gobol. Dadka figraddan qaba waxay u arkaan in shanta gobol yihiin Somaliland (Isaaq/Dir), Puntland (Harti/Daarood), Gobollada Dhexe (Hawiye) Koonfur-Galbeed (Digil/Mirifle), Jubba Land (Daarood, Digil/Mirifle/Dir/Hawiye). Dadka qaba figraddani iskuma wada waafaqsana gobolladan iyo xuduudahooda, waxayse ku doodaan in doodda laga billaabo halkan oo figraddan lagu saleeyo nidaamkan federaalka.
Waxaa jira cillado fara badan oo weheliya inaan heshiis lagu ahayn nidaamkan. Tiradu way ka yar tahay 18 gobol iyo 8 gobol. Waxaana dhici karta inay wax badan ka jiraan inay ka tarjumayso xaqiiqada hadda ka jirta dalka. Laakiin, haddii qaabkan la qaato, weli way taagnaanayaan su‟aalihii la xiriiray qaadashada qaabka federaalku inuu xal u yahay Soomaaliya iyo in kale. Waxba ka baddeli meyso tirada gobolladu asalka doodda oo ah in nidaamka federaalku xal yahay iyo in kale.
Gobollada ka dhashay dagaallada sokeeye waxay wataan cillad dheeri ah. Marka xaqiiqo ahaan haddii la qaato shantan gobol waxa federaalka loo samaynayaa qabiillo ee ma ahan gobollo.
Haddii sidan la yeelayo looma baahna nidaam federal ah ee waxaa loo baahan yahay nidaam kale oo la yiraahdo “Consociational Model.” Nidaamkaasi wuxuu oggolaanayaa in qabaa‟ilka loo sameeyo hab ay awoodda ku qeybsadaan, ayna ku xeeriyaan danahooda hoose. Muhiim ma ahan in qabiil kasta uu gobol deggen yahay, walow ay sahlayso hawlaha. Markaas, waxaa la dhihi karaa, waxaa nidaamka lagu salaynayaa qaabka qabiilka. Tusaale, waxaa la qaadan karaa qabaa‟ilka waaweyn sida Daarood, Dir, Hawiye, Isaaq, Digil, Mirifle iyo Beelaha Wadajir (waa magaca uu Sheekh Cumar Faaruuq u bixiyeye). Haddii sidan la yeelayo, ma ahan in la isku wareeriyo xuduudaha gobollada iyo nidaam federal ah toona. Haddii si kale loo dhigo, nidaamka awoodda loogu qeybinayo beelaha (consociation) waa habka laga soo minguuriyey 4.5. Marka haddii la isla garto in qabiilka lagu saleeyo federal ma noqonayo waayo nidaamka federaalku asal ahaan waxa uu ku salaysan yahay dhul xuduuddiisa la yaqaan. Kan ku salaysan 4.5 ee hadda jira oo wax laga baddalo ayaa ku filnaan kara markaas.
Isku soo duuboo, dhammaan hababka aan kor ku soo sheegay waxaa laga fahmi karaa inaysan sahlanayn in laga hirgeliyo nidaam federal ah Soomaaliya. Cilladaha uu nidaamka federaaliga ahi asal ahaan wato ka sokow, waxaa jira caqabooyin badan oo ku tacalluqa duruufaha Soomaalida oo aan oggolaanayn nidaamkan. Shirkii Carta iyo kii Kenya ma aysan joogin gobollo is aqoonsan oo uu mid walba leeyahay nidaamkiisa oo doonaya inay samaystaan nidaam federaalli ah. Waxaa joogay dad badan oo ka socda bulshada rayadka ah iyo hoggaamiyeyaalka kooxaha. Haddaba, maaddaama aysan jirin gobollo la isku oggol yahay oo sameeya dowlad federaal ah, waxaa la dhihi karaa lagama samayn karo nidaamka federaalka Soomaaliya. Waase suurtagal in lagu qoro waraaqaha la saxiixayo.
Soomaaliya ma u Baahan Tahay Nidaam Federal ah?
Runtii, shaqsi ahaan, kama soo horjeedo mana diiddani nidaamka federaalka asal ahaan. Nidaamka federaalku wuxuu ka mid yahay hababka lagu maareeyo khilaafaadka siyaasiga ah. Waa nidaam hore loo soo tijaabiyey. Inkasta oo uu meelo farabadan oo ka mid ah meelihi laga isticmaalay nidaamkani uu ka shaqeeyey, haddana, inta badan waa uu shaqeyn waayey. Doodda aan ka qabo nidaamka federaalku waxay la xiriirtaa sida uu ugu habboon yahay Soomaaliya.
Waxaan rumeysanahaya inaan loo baahnayn nidaamkan marka la maareynayo mushkiladda Soomaaliya. Dooddayda waxaan ku salaynayaa qodobbada soo socda:
Kow, sida ay sheegaan culumada daraaseeya arrinkan, nidaamka federaalku wuxuu ku habboon yahay dalalka juqraafi ahaan aadka u waaweyn sida Canada, Ameerica, Ruushka iyo Australia.
Waxaa kale oo ku habboon yahay dalalka juqraafi ahaan kala qeybsan ee ay u dhexeeyaan buuro ama bad sida Malaysia iyo New Zealand. Soomaaliya dalkeeda sidaas uma weyna. Marka aan sidan leeyahay waxaan ula jeedaa dhulka Soomaalidu degto oo dhan. Haddaba, dal aad u ballaaran ma hayno. Xajmiga dalkeennu kama dhigayo lamahuraan inaan qaadanno nidaamkan federaalka. Mana jiraan buuro iyo bado qeybiya Soomaalida.
Labo, nidaamka federaalku wuxuu ku fiican yahay dalalka leh dad badan oo ku kala duwan diinta, dhaqanka iyo sinjiga sida India, Nigeria iyo Canada. Dadkeenna waxaa laqu qiyaasaatoban milyan marka la badiyo. Tirada ka sokow, Soomaalida waxaa lagu tilmaamaa dad ahaan dad si kasta isku mid u ah marka laga soo fiiriyo xagga diinta, dhaqanka iyo xagga luqaddaba.
Haddaba, ma jirto sabab lama huraan ka dhigeysa inaan qaadanno nidaamkan. Saddex, waxaa qaadan kara nidaamka federaalka dalalka leh dhaqaale xooggan oo awooda inay bixiyaan kharashka heerar-dowladeedyo kala duwan sida Canada, Germany, Ameerica, Australia iyo kuwo kale oo badan. Soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka ugu saboolsan dunida.
Dowladihii dalka soo maray waxay ku tiirsanaayeen kaalmada dibadda. Cilmi-baarisyada qaar waxay tilmaamayaan in 60-80% ay miisaaniyadda Soomaaliya ka iman jirtay kaalmo dibadeed. Runtii, qaab-goboleed kasta (18, 8, 5, 4 ama 2) oo la qaato, aad buu u yar yahay ama maba jiro gobol Soomaali ah oo is-bixin kara dhaqaale ahaan. Xitaa markaad fiiriso dhaqaalaha Somaliland iyo Puntland aad buu u yar yahay, mana awoodaan inay bulshada siiyaan adeegyada ay u baahan
yihiin dadku. Miisaaniyadda dowladda Somaliland waxaa lagu qiyaasaa 40 milyan halka tan Puntland ay ahayd 20 milyan. Tan TFG iyadana waxaa lagu sheegay 115 milyan 00 80% laga sugayo deeqbixiyayaasha. Marka dhammaantood la isku daro waxaa cad inaan dal federaal ah lagu maamuli karin.
Dadka Soomaaliyeed oo ay isaga danbeeyeen dowlado aan u tureyn, abaaro dabadheeraaday iyo dagaallo sokeeye waxaa la dhihi karaa dhammaantood waa qaxooti. Kuwa dalka joogana waxay u badan yihiin dad ka soo bara-kacay meelihii ay deggenaan jireen, kuwa dibadda joogana waaba qaxootiga ugu roon. Haddaba, awoodaha uu nidaamka federaalku gobollada iyo dowladda dhexe u qeybinayo waxaa ugu muhiimsan awoodda canshuurista iyo awoodda xeerinta. Waxaan la
yaabay caqliga keenay in la sameeyo dhowr dowladood oo canshuura ummad dhammaanteed qaxooti ah. Cajiib! Afar, nidaamka federaalku ma ahan nidaam, figrad ahaan, ka yimid dadka Soomaaliyeed. Ma jirto dowlad Soomaaliyeed oo heysata kalsoonida dadweynaha oo inta baartay, dabadeed go‟aansatay in nidaamkani uu ku habboon yahay Soomaalida. Sidoo kale, weli ma arag qof mas‟uul ah oo aqoonyahan ah oo sameeyey cilmi-baaris, dabadeedna ku soo gunaanaday in nidaamkani uu u yahay xal mushkiladda Soomaalida. Weli ma arag afti dadweynaha laqa qaaday. Sidoo kale, doodda oranaysa dagaalka sokeeye wuxuu u dhacay nidaamka federaalka la‟aantiis waa daciif. Waxay figraddani ku baahday ku-tiri-ku-teen iyo wax aan aqoon ku dhisnayn. Kadibna, waxaa iska bartay carrabka dadka. Waxaad arki marka ay qabqablaha dagaalka xaajadu ku adag tahay ee waxa uu rabo uu waayo inuu iskala soo boodayo, „waxaan rabnaa nidaamka federaalka‟.
Shan, nidaamka federaalku ma daweeyo keli-telisnimada wallow uu ka mid yahay aaladaha la adeegsado. Marka aad si dhab ah u fiiriso sababta ku kallifeysa Soomaalida nidaamkan, waxaad dareemeysaa inay intooda badan u heystaan inuu xal u yahay keli-talisnimada. Xaqiiqatan, waxaa jirta dood oranaysa nidaamka federaalku wuxuu u sahlaa kooxaha mintidka ah iyo kelitaliyeyaasha inay xukun qabsadaan. Tusaale, waxaa ah dalka Jarmalka xilligii Hitler. Waxaa kale oo jira kooxaha loo yaqaan KKK (Ku Klux Klan) inay koontoroollaan magaalooyin iyo heerardowladeedyo hoose oo ka mid ah gobollada dalka Mareykanka. Keli-talisnimada waxaa xal u ah in nidaamka dowladda dalku uu noqdo mid u oggolaanaya qof kasta inuu ka qeyb qaato go‟aamada dalka – ama aan fududeeyo e inuu nidaamku noqdo dimoqraadi.
Waxaa kale oo la isticmaali karaa nidaamka labada aqal ee odoyaasha iyo kan wakiillada. Waxaa intan lagu sii lifaaqi karaa in dowladda dhexe ay siiso gobollada iyo degmooyinka awoodhoosaad ku salaysan xeer ay iyadu dejisay (Decentralized Unitary System). Sidoo kale, waxaa la xoojin karaa saxaafadda madaxa bannaan iyo ururrada bulshada rayadka ah, garsoorka iyo culumada. Intan oo iskaashatay way ku filan tahay inay dowladda ka ilaaliyaan inay ku tagrifasho awoodda. Haddii aan si kale u iraahdo ummaddu waxay u baahan tahay xukun furfuran oo demoqraadi ah ee uma baahna mid qeybsan oo aan xasilloonayn. Dal kasta oo federal ah ma ahan Dimoqraaddi. Bal e fiiri dalal ay ka mid yihiin Pakistan, Indoenesia, Nijeeriya, Itoobiya, Malaysia iyo qaar kale oo soo maray xilli ay keli-talisyo ka talinayen. Sidaa darteed, waxaan qabaa inaan loo baahnayn nidaam federal ah oo aan awood dhaqaale iyo mid aqooneed toona aan
Lix, dhammaan waxyaalaha waxtarka ah ee ku jira nidaamkan waxaa laga heli karaa nidaamyada kale ee dimoqraadiga. In ka badan 85% dalalka dunidu ma ahan federal. Waxaa federaal ah illaa 24 dowladood oo kaliya. Waxaa intaas dheer in qaar badan oo dalalkaan ka mid ah ay ka dhaqaale badan yihiin, kana dal ballaaran yihiin Soomaalida – wallow ay jiraan kuwa magicahaan federaal ah laakiin xaqiiqo ahaan aan ahayn sida Itoobiya, Nijeeriya iyo Koonfur Afrika.
Dhammaan waxtarka aan kor ku soo sheegey ma jirto mid ka mid ah oo aan laga heleyn nidaamyada kale. Waxaa intaas dheer, haddii la qaato nidaamyada kale (decentralized unitary state), waxaa laga hortagayaa waxyeellooyinka uu nidaamkani wato. Waxyeellada ugu weyn ee gaar ahaan Soomaalida quseysa waa xasillooni la‟aanta uu nidaamkani wato. Ma jiro qaab heshiis lagu yahay. Dadkii waxaa kala galay colaad oo wey kala qaxeen, waxayna kala tirsanayaan dhibaatooyin badan. Waxaa jira hub fara badan oo weli ku jira gacanta dadweynaha.
Intaasoo arrimood oo isbiirsaday, marka lagu sii daro nidaam federaal ah oo keenaya in arrin kasta ay abuuri karo xasaasiyad, ayna mar walba jiraan hoggaamiyeyaal dano kale wata, taas macnaheedu wuxuu noqonayaa Soomaalidu yeysan heshiin qarniyada soo socda. Waxaa la dhihi karaa, ujeeddadu waa inay Soomaalidu isku-mashquulsanaato waligeed.
Toddobo, ugu danbayntii, nidaamka federaalku wuxuu xoojinayaa qabyaaladda, wuxuuna wiiqayaa qarannimada Soomaalida. Gobol kasta waxaa isku aqoonsan qabiil gooni ah. Inuu iskuaqoonsan yahay oo kaliya ma ahan ee waxa imanaysa inuu inta kale uusan u aqoonsan inay xaq ku leeyihiin. Waxaa kale oo dhacaysa in adeegyada dowladda lagu dhibo ama loo diido dadka kale oo Soomaaliyeed. Halkaas waxaa ku dhimanaya dantii guud ee qaranka iyo xuquuqdii uu qofka Soomaaliga ah ku muteystay Soomaalinimada. Dastuurkii 1960 iyo kuwii ka danbeeyey waxyaalaha wanaagsan ee ku qornaa waxaa ka mid ah in qof kasta oo Soomaali ah uu leeyahay xaqa qofka kale oo Soomaaliga uu leeyahay iyadoo aan loo eegin gobol iyo qabiil toona. Dadka Soomaaliyeed ee ka yimid Soomaali Galbeed, NFD iyo Djibouti wuxuu dastuurkaasi u oggolaa xaqa qofka Soomaaliga ah. Waxay ahayd arrin aad u wanaagsan. Sidaasna waxaa fursad ku helay oo wax ku bartay ama madax kaga noqday Soomaalidii xorta ahayd dad farabadan oo Soomaaliyeed oo ka yimid gobolladaas. Haddii shaarka nidaamka federaalka loo geliyo gobollada qabiilka ku dhisan ee Soomaalida, waxaa imanaysa in dad badan oo Soomaali ah xuquuqdooda la duudsiyo. Kuwo gobollada Soomaali-Galbeed iyo NFD iyo kuwa gobollada kale ku nool marka laga soo tago, waxaa dhacaysa in qaar ku dhashay gobolka lagu takooro qabyaalad.
Halista Dastuurka Cusub ee Soomaaliya! Halkaan ka Akhri Full News
Waxtarka Nidaamka Federaalka Nidaamka federaalka waxaa lagu soo dhaqmayey muddo dheer. Dalalka qaar, sida Switzerlandiyo Mareykanku waxay tirsanayaan boqollaal sano. Waa nidaam wax badan laga qoray oo siyaabo kala duwan loo daraaseeyey. Marka waxaan halkan ku soo koobi doonaa wixii qasaaro iyo faa‟iido laga soo dheegay intii lagu soo dhaqmayey. Culumada siyaasadda ee wax ka qora nidaamkani … Continue reading »
Nidaamka Federaalku Xal uma ahan Dhibaatada Soomaalida Qormadan waxaa igu kallifay inaan qoro saddex arrimood. Kow, waxaa jira jamasho guud oo aan run ku qotomin oo dadka Soomaaliyeed ay qabaan nidaamka federaalliga ah. Waxaa, inta badan, dadka Soomaaliyeed ka muuqata inay kalsooni dheeraad ah u hayaan nidaamkan iyadoo aadba mooddo inay rumeysan yihiin inuu xal … Continue reading »
Nidaamka Federaalku Xal uma ahan Dhibaatada Soomaalida Nuxurka Doodda Warqaddan waxaan ku lafagurayaa nidaamka federaalka iyo sida uusan ugu habboonayn maaraynta khilaafaadka siyaasadeed ee Soomaaliya ka jira. Waxaan marka hore sharxayaa waxa looga jeedo federaal iyo calaamadaha lagu yaqaan dalalka noqda federaal oo ah tiro aad u yar. Dabadeed, waxaan soo bandhigayaa waxtarka iyo waxyeellooyinka laga arkay … Continue reading »
Halista Dastuurka Cusub ee Soomaaliya!
Ra`iisal wasaarihii hore ee Soomaaliya mudane Maxamed C/laahi Farmaajo oo shalay galabtii soo gaaray caasimadda dalka Norway ee Oslo ayaa casho-sharaf loogu sameeyay magaalada Oslo. Dastuurka cusub ee la doonayo in laga ansixiyo shirka wadatashiga Soomaaliya marka si degan loo akhriyo wuxuu halis ku yahay wadajirka iyo Cadaalada beelaha Soomaaliyeed Arintaan Ra”iisal Wasaarihii hore ee … Continue reading »
Shariif Xasan ayaa si degdeg ah booqasho ugu tegey magaalada Addis Ababa ka hor intii uusan ku soo laaban Muqdisho, arrintaas oo timid kaddib markii 280 xildhibaan ay xilka ka xayuubiyeen. Shariif Xasan oo markii xilka laga qaaday ku maqnaa dalka Talyaaniga ayaa si degdeg ah ugu duulay Addis Ababa, ka hor intii uusan tegin …Continue reading »
3 thoughts on “Q.3aad – Nidaamka Federaalku Xal uma ahan Dhibaatada Soomaalida”
Anbal kawardhawro kulanka ka dhici doona magaalada Garoowe ee maamul goboleedkaPuntland bishan aan ku jiro sagaalkeeda-09/12/11 kaasoo lagu lafa garidoono(Constition-ka ama dastuurka maadama uu kamid ahaa 4-tii qodob ooliishaanka la saarey,garoowana looga doodi doono qodobkan.